KUMAHEBHERE 3 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
KUMAHEBHERE 3KUMAHEBHER ... 3
UYesu mkhulu kunoMosis
31Ngoko ke, mawethu abiziweyo ayimilowo yendlu kaThixo, khanimjongisise uYesu lo simvumayo thina makholwa ukuba *ungumthunywa kaThixo kwanombingeleli wethu omkhulu. 2Yena wathembeka kuThixo owammiselayo, kwanjengokuba noMosis wayethembekile endlwini kaThixo.Ntlango 12:7 3Kakade umakhi wendlu uzuza udumo kunendlu leyo ayakhileyo. Ngokunjalo ke noYesu uzuze udumo olungaphezulu kolukaMosis. 4Indlu nganye inomakhi wayo, kodwa ke nguThixo umseki wazo zonke izinto. 5Ke yena uMosis wayethembekile endlwini kaThixo iphela, esisicaka esasimela ukwalatha izinto ezaziza kutyhilwa nguThixo. 6Kodwa ke yena uKrestu uthembeke njengonyana endlwini yakhe. Indlu leyo ke síthí, ngakumbi ukuba sibambelele singenadyudyu kwithemba lethu esinebhongo ngalo.
Ukuphumla kwabantu bakaThixo
7Kungoko ke noMoya oyiNgcwele atshoyo ukuthi:
“Nakuliva ilizwi lakhe namhlanje,
8sanukuba neenkani njengakwimihla yesidube-dube entlango apho namlingayo uThixo.
9‘Apho bandivavanyayo bandilinga ooyihlo,’ utsho uThixo,
‘nakuba yaba ngamashumi amane eminyaka beyibona imisebenzi yam.
10Nantso into eyandicaphukisayo kweso sizukulwana, ndaza ndathi:
abaziqondi iindlela zam.
11Futhi ndada ndafunga ndinomsindo, ndathi:
Abasoze bangene ekuphumleni kwam.’ ”Ndum 95:7-11
12Niyabona ke, mawethu, lumkani kungabikho bani kuni ukhohlakeleyo, ungakholwayo, ongumkreqi kuThixo ophilayo. 13Kambe ke, ngoku kusathiwa “namhlanje,” khuthazanani yonke imihla, ukuze kungabikho mntu uqaqadekiswa ngumtsalane wesono. 14Kaloku nathi sinobudlelane noKrestu, xa sinamathele kwada kwasekupheleni kwisivumo sethu.
15*IziBhalo xa zisithi:
sanukuba neenkani njengakwimihla yesidube-dube,”Ndum 95:7-8
16zibhekisa kubani? Ngoobani abo bevayo kodwa bagwilika? Kaloku ngabo babephuma eJiputa bekhokelwa nguMosis. 17Ingoobani abo bamcaphukisayo iminyaka engamashumi amane uThixo? Ngokuqinisekileyo ngabo bonayo, abazidumbu zathi waca entlango. 18Ngoobani abo wabafungelayo uThixo esithi abasoze bangene ekuphumleni kwakhe? Wayexela abo bamvukeláyo. 19Siyabona ke ukuba ababanga nako ukungena kuba bengakholwa.Ntlango 14:1-35